Iindaba - Ukulungiswa kweGalic Acid
Ukulungiselela i-Gallic Acid
Indlela ye-asidi ye-hydrolysis yahlulwe ngokukodwa kwinyathelo elinye kunye neendlela ezimbini. Eyona nkqubo iphambili yokuhamba kwamanyathelo amabini okulungiselela i-gallic acid ekrwada → ukukhutshwa kwamanzi ashushu → intsalela yokuhluza → i-tannin isisombululo esixineneyo samanzi malunga ne-20% → i-asidi ye-hydrolysis → i-crystallization yokupholisa → i-centrifugation ukufumana imveliso ekrwada → Ukupheliswa kwemveliso ekrwada kunye namalahle emva kokuhluza Ukupholisa kunye ne-crystallization → i-centrifugation → ukomisa → imveliso egqityiweyo ye-gallic acid. Inkqubo yenyathelo elinye yokulungiselela i-gallic acid isusa isidingo sinyathelo elinye leaching cyanine xa kuthelekiswa nenkqubo yamanyathelo amabini. Yongezwa ngokuthe ngqo nge-acid hydrolysis, ishenxisa isidingo sokutyumza, ukuqhekeza, ukugxila kunye nezinye iinkqubo, ukunciphisa umjikelo wemveliso, kunye nenkqubo yendlela kunye noyilo lwezixhobo zinokwenzeka, uphuhliso lweemveliso zalo lufezekisile izibonelelo ezilungileyo zoqoqosho, kwaye zafunyanwa. indlela yokuphuma kwimithombo yehlathi kwimimandla yeentaba.
Nangona kunjalo, iasidi yesulphuric esetyenziswa kwindlela yeasidi yehydrolysis yiasidi eyomeleleyo, ebola izixhobo ukuya kumaqondo ahlukeneyo. Nangona zombini isihluzi sokuphendula kunye nefriji zenziwe ngentsimbi engenasici, ngenxa yeqondo lobushushu eliphezulu lokuphendula kunye noxinaniso oluphezulu lweasidi, umhlwa uyacaca, ochaphazela ngqo ubomi benkonzo yezixhobo.
I-alkaline hydrolysis kukukhupha i-hydrolyze isicatshulwa sempahla eluhlaza, oko kukuthi, isisombululo se-tannin e-aqueous phantsi kweemeko ze-alkaline, kwaye emva koko uthomalalise kunye ne-asidi ye-asidi ukuze uvelise i-asidi ye-gallic.
Inkqubo ephambili yokuhamba kwezinto ezingafunekiyo → ukukhutshwa kwamanzi ashushu → i-alkali hydrolysis → i-acid ye-acid → i-crystallization yokupholisa → i-centrifugation yokufumana imveliso ekrwada → Ukupheliswa kwemveliso ekrwada kunye namalahle decolorization → ukuhluza kunye ne-crystallization → isirinji → ukomisa → imveliso yeasidi yegalikhi.
Xa kuthelekiswa nendlela ye-asidi hydrolysis, indlela ye-alkaline hydrolysis ayonakalisi kangako kwisixhobo kwaye inciphisa kakhulu ukwehla kwezixhobo, kodwa inkqubo inzima ngakumbi kunendlela ye-acid hydrolysis. Uninzi lwemveliso yeasidi ye-gallic yasekhaya isebenzisa i-alkaline hydrolysis. 
Indlela yokuvumba isebenzisa amagciwane ukubila kwisisombululo esinamandla esiqukethe iitannins, kwaye isebenzisa iswekile kwii-tannins njengomthombo wekhabhoni wokukhula kunye nokuzala kwakhona kwamagciwane. Ii-enzymes zebhayoloji ezibangelwa zii-microorganisms zibangela ukuba i-hydrolysis yetannins.
Ukuhamba kwenkqubo Gaya izinto ezingafunekiyo kububanzi obungaphantsi kwe-10mm → cofa umgubo wezinambuzane → ungene emanzini ukuphakamisa isisombululo se-30% yesisombululo → yongeza iintlobo zomngundo omnyama → ukubila kweentsuku eziyi-8-9 → ukuhluza → ukuhlamba → i-asidi ye-gallic acid → ukunyibilika kunye Ukuphinda kwenziwe umsebenzi kwakhona → i-acid yegalikhi yoshishino.
Eyona ngxaki iphambili kwindlela yokubila kukuba ukwenziwa kwee-enzymes zebhayiloji kunye ne-hydrolysis yetannins zenziwa kwisitya esinye sokuphendula, kwaye iimeko zenkqubo kunzima ukufikelela kwimeko efanelekileyo, ekhokelela kumjikelo wokuphendula omde (ngaphezulu kwe-3 iintsuku), i-hydrolysis engaphelelanga yetannins, kunye neetannin zentsalela ukuya kuthi ga kwi-15% ~ 20%.
Ngenxa yokusilela kwendlela yokubila, uphando kwiinkqubo ezintsha ze-enzymatic ziphuhlisiwe ekhaya nakumazwe aphesheya. Isitshixo sendlela ye-enzymatic kukucoca kunye nokulungiselela ii-enzymes zebhayoloji ezifanelekileyo. I-Tanninase yi-acetyl hydrolase, ene-acyl hydrolase eyongezelelekileyo, enokuthi isebenze ngokufanelekileyo, ngakumbi, kwaye icofe i-ester bond, bond depsil kunye ne-glycosidic bond kwiimolekyuli ze-tannin ukuvelisa i-gallic acid. Phantsi kweemeko ezifanelekileyo, ukungunda ezahlukeneyo kunye neetannins ze-inducer zinokuvelisa i-tannase. Uhlobo olusetyenziswa ngokuxhaphakileyo yiAspergillus niger.
Inkqubo yokuhamba kwembewu ye-Enzyme → imveliso ye-enzyme → (ukongeza izinto ezingavunyelwanga) i-hydrolysis → ukucoca ulwelo → uxinizelelo → i-crystallization erhabaxa → ukwahlula → i-decolorization → i-crystallization ephambili → i-crystallization yesibini → ukomisa → ukutyumza → i-gallic acid.
Xa kuthelekiswa nendlela yokubila, indlela ye-enzymatic ilifinyeze kakhulu ixesha lokuphendula, i-tannin hydrolysis rate rate ingaphezulu kwama-98%, kwaye isalathiso sokusetyenziswa kunye neendleko zemveliso zincitshisiwe kakhulu.